ब्लग र ब्लगिङः शुरुवाती ब्लगरहरुलाई आधारभुत जानकारी - MeroReport
ब्लग र ब्लगिङः शुरुवाती ब्लगरहरुलाई आधारभुत जानकारी
ब्लग भनेको आफ्नो बिचार, अनुभव, फोटो, भिडियो, समाचार, कथा, कबिताहरु पोस्ट गर्ने एउटा अनलाईन थलो हो । ब्लग ईन्टरनेटको साईटहरुमा पोस्ट गर्ने अनलाईन डायरी हो र यसरी पोस्ट गर्नुलाई ब्लगिङ भनिन्छ ।
कति मानिसहरु राम्रो सँग बोलेर अभिब्यक्त गर्न सक्छन तर लेख्न सक्दैनन यसको कारण भनेको उनिहरुको लेख्ने बानी नहुनु हो । त्यसैले यस्तो बनी सुधारने प्रभाबकारी उपाय भनेको ब्लग लेख्नु हो ।
तपाईंले ब्लग लेख्दा गरेको गल्ती औंलाउने पनि धेरै साथिहरु ईन्टरनेटमा हुन्छन र उनिहरुले तपाईंलाई के केमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह पनि दिन्छन । यसले तपाईंलाई राम्रो ब्लग लेख्न सिकाउछ र बिस्तारै तपाईं एउटा राम्रो लेखक बन्न सक्नुहुन्छ । ब्लगिङ भनेको यस्तो शक्तिशली माध्यम हो जसको सहायताले तपाईं संसारसँग एउटा क्लिकबाट नै सम्पर्कमा बस्न सक्नु हुन्छ । ब्लग जसले पनि जहाँबाट जतिबेला पनि लेख्न सक्छ तर यसको लागि ईन्टरनेटको सुबिधा हुनपर्छ ।
१ राम्रो नेट्वर्किङ्
२ धेरै साथिहरु
३ समाचार तथा घट्नाको अपडेट
४ लेखाइमा सुधार
५ पढाईमा सुधार
६ आफ्नो भावना, बिचार र अनुभव साटासाट
७ समाचारको सहज पहुंच
८ टेक्नोलोजीको जानकारी
९ स्रोतहरुको सहज पहुंच
१० आम्दानीको स्रोत
ब्लग प्रोफाइल कसरी बनाउने ?
Wordpress.com अथवा blogger.com मा जानुहोस त्यहाँ दिईएको निर्देशन अनुसार फर्म भर्नुहोस र आफ्नो ब्लग बनाउनुहोस । उदाहरण को लागि: यदी तपाईं blogger.com मा ब्लग बनाउदै हुनुहुन्छ भने:
blogger.com मा गएर Create blog now मा क्लिक गर्नुहोस ।
त्यसमा आफ्नो ब्यक्तिगत जनकारी भर्नुहोस र continue मा क्लिक गर्नुहोस ।
अर्को पानामा गई तपाईं आफ्नो लागि एउटा web address र title छान्नुहोस ।
web address अरु कसैले बनाएको हुनु हुँदैन त्यसैले आफ्नो web address unique राख्नुहोस ।
त्यसपछी continue मा क्लिक गर्नुहोस त्यहाँ तपाईं आफ्नो ब्लग पेज को लागि एउटा template छान्नुहोस (यो पछी परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ) ।
फेरी continue मा क्लिक गर्नुहोस ।
यसपछी तपाईंको आफ्नै ब्लग बन्छ, आफुले लेखेको ब्लगमा प्रकाशित गर्नका लागि start posting मा क्लिक गर्नुहोस ।
तपाईंले आफ्नो टेक्स्टलाई ईमेलमा जस्तै format गर्न पनि सक्नु हुन्छ । आफुले प्रकाशित गरेको ब्लग हेर्नको लागि view blog मा क्लिक गर्नुहोस । तपाईंले ब्लग प्रकाशित गरेपछी google जस्तो सर्च ईन्जिनबाट आफ्नो ब्लग खोज्न पनि सक्नु हुन्छ।
मेरोरिपोर्टमा ब्लगिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने थप कुराः
यदि समाचार पोष्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने 'news' ट्याग गर्न नबिर्सनुहोला ।
समाचारलाई सकेसम्म मानवीय रुचिका विषय जस्तै कुनै छोटो कुराकानी, चुट्किला वा घटनाबाट शुरु गर्नुभयो भने तपाईंको पोष्ट धेरै जनाले पढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
शीर्षकहरु छोटा र आकर्षक बनाउनुस् । कुनै पनि कुरालाइृ शीर्षकमा नदोहोर्याउनुस् । शीर्षक लेख्दा के यो कुरा शीर्षकमै नलेखी नहुने महत्वपुर्ण कुरा हो ? भनेर एकचोटि घोत्लिनुस् ।
अनुच्छेदहरु २ वा ३ लाइनका मात्र बनाउनुस् । लामा अनुच्छेदले लेखलाइृ भद्दा देखाउँछ र पाठकमा पढ्ने इच्छा शक्ति पनि रहँदैन ।
आफ्ना् कुरालाई सकेसम्म छोटोमा राख्नुस् ।
आफ्ना पाठक बढाइराख्न अरुका ब्लगपोष्टहरु पनि पढेर प्रतिक्रिया दिने गर्नुस् । तपाईंले अरुको पोष्टमा जति प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, त्यति नै तपाईंको पोष्टले पनि प्रतिक्रिया र पाठक पाउने सम्भावना रहन्छ ।
पाठकहरुसित नियमित अन्तरक्रियामा रहनुस् र उनीहरुले दिएका प्रतिक्रियालाई खुला दिलले स्वागत गर्नुस् ।
तपाईं जति नियमित रुपमा लेख्नुहुन्छ, त्यति नै नियमित पाठक बन्नेछन् । पन्ध्र दिन वा एक महिनामा टप्कने व्यक्तिलाई अरुले त्यति ध्यान नदिन सक्दछन् ।
लेख्दै रहनुस् । कुनै लेख वा ब्लगपोष्टमा पाठक भएनन् वा प्रतिक्रिया आएनन् भनेर हतोत्साहित नहुनुस् । मेरोरिपोर्टका नियमित पाठक छन् र लेख्दै जाँदा तपाईंले तिनीहरुको मन जित्नुहुनेछ ।
नागरिक पत्रकारिताबारे सन्दर्भ सामग्रीहरु
Comment by Hari Manandhar on December 12, 2011 at 1:35pm
अति महत्वपूर्ण जानकारीहरूले भरिएका रहेछन् यस हप्ता । धन्यवाद यहाँहरूलार्इ ।